There are stillalot of Islamophobic Myanmars | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« ‘Eat It Don’t Tweet It’ video pokes fun at foodie shutterbugs
My hero meets my grand daughter’s hero in Disney Dreams »
နေအိမ်အတွင်း ဗလီဆောက်ဖို့ ကြိုးပမ်းသည့်အတွက် ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့ခံများ ဝိုင်းဝန်းဖြိုဖျက် by Burma VJ Media Network on Saturday, March 31, 2012 Reported By ဇာဏီ၊ မတ်လ ၃၀ ရက်နေ့၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်။
မန္တလေးတိုင်း ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ် ဘုရားနီ ဘုရားအနီးရှိ အိမ်တအိမ်အတွင်း ဗလီ ဆောက်လုပ်ရန် ကြိုးစားသည့်အတွက် ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့ခံ လူဦးရေ တသောင်းခွဲ ဝန်းကျင်ခန့် လာရောက် ဖြိုဖျက်နေသည်လို့ မြို့ခံပြည်သူတဦးက ဘားမားဗီဂျေ မီဒီယာကို သတင်းပေးပို့ပါသည်။
အခုလို ဖြစ်ပွားနေသည့် ပြဿနာအပေါ် ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ် နိုင်ငံရေး အသိုင်းအဝိုင်းက ပြောနေကြတာကတော့ “ အရင်တုန်း ကတည်းက ကျောက်ပန်းတောင်းက လူမျိုးခြားကုလား လက်မခံတဲ့ မြို့ ဖြစ်တယ်၊ ညအိပ်ညနေတောင် လက်မခံဘူး။ အပြင်ဘက်မှာ ထွက်နေတဲ့အသံက ကျောက်ပန်းတောင်းမှာ ကုလားတွေ ဗလီ ဆောက်တယ်ဆိုပြီး သတင်းရလို့ မြို့ခံတွေ စုပေါင်းပြီး ဝင်ဖျက်နေတာ၊ လူထုက တသောင်းခွဲလောက် ရှိတယ်၊ ကားအစီး ၁၀၀ လောက် ရှိသွားပြီ၊ တကယ်က ကုလားနဲ့ ဘုန်းကြီးနဲ့ ပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ အသံထွက်နေတာ” ဟု မြို့ခံ တဦးက ဘားမားဗီဂျေ မီဒီယာကို ပြောပါသည်။
Maurice Collis recorded the root of Anti-Indian and Anti-Muslim sentiments in Burma/Myanmar in his book “Trials in Burma” (drkokogyi.wordpress.com)
Tags: Asia, Aung Khin, Bagan, Burma, Islamophobia, Malaysia, Mount Popa, Muslim, Myanmar
This entry was posted on March 31, 2012 at 5:42 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
5 Responses to “There are stillalot of Islamophobic Myanmars”
Lin Win Thu wrote:
မီဒီယာသမားတို့သည် မိမိတို့၏ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာကိုတော့ စောင့်စည်းဖို့ လိုမည်ထင်ပါတယ်။ ယခု သတင်းတွင် Burma VJ သည် ခေါင်းစဉ်တပ်ထားသည်မှာ မှားယွင်းနေပါသည်။ “နေအိမ်အတွင်း ဗလီဆောက်ဖို့ ကြိုးပမ်းခြင်း”ဆိုသည် မဟုတ်ပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ၏ နေအိမ်တိုင်းတွင် ဘုရားစင်ရှိကြပြီး နေ့စဉ် ဘုရားဝတ်ပြုကြပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ပင် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များသည်လဲ နေ့စဉ် တစ်နေ့ငါးကြိမ် ဘုရားဝတ်ပြုကြရပါသည်။ အမျိုးသားများ ဗလီရှိပါက ဗလီသို့ သွားရောက်၍ စုပေါင်းဝတ်ပြုရပါသည်။ ဗလီမရှိပါက သန့်ပြန့်သော တစ်နေရာတွင် စုပေါင်း၍ ၀တ်ပြုကြရပါမည်။ အမျိုးသမီးများကတော့ တစ်ဦးတည်း အိမ်တွင် ၀တ်ပြုကြရပါသည်။ ထို့ကြောင့် ခေါင်းစဉ်အရဆိုရင် ပြဿနာများ ကြီးထွားလာနိုင်ပါသည်။
အမှန်တကယ်တမ်း ဒီကိစ္စသည် ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့တွင် အစိုးရအဆောက်အဦးတစ်လုံးတည်​ဆောက်ရန်ရောက်ရှိနေသည့် ကန်ထရိုက်မှ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် အလုပ်သမားများသည် ကန်ထရိုက်မှ ငှားရမ်းပေးထားသည့် အလုပ်သမားနေအိမ်တွင် စုပေါင်းဝတ်ပြုခြင်းမျှသာ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကိစ္စအပေါ် ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့သူမြို့သားများထံ ဗလီဆောက်ခြင်းဟု ကောလဟာလသတင်းတွေ ဖြစ်ပေါ်ပြီး အဲ့ဒီအိမ်ကို အခုလို ဖျက်ဆီးလိုက်တာပါ။
ခါတိုင်းလဲ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့တွင်း​၌ အခြေချနေထိုင်၍ ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ် စီးပွားရှာလုပ်ကိုင်နေသူ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များလဲ ရှိပါသည်။ မည်သည့်ပြဿနာမျှ မရှိကြပါ။ ယခုဖြစ်ပေါ်သည့် ပြဿနာအရင်းခံမှာ ကောလဟာလ သတင်းများအပေါ် အခြေခံ၍ ပြည်သူအကြား ဒွိဟဖြစ်ပြီး မြင်နေကျမဟုတ်သည့် လူစိမ်း ဧည့်သည် ကန်ထရိုက်များအပေါ် သံသယအမြင်ဖြင့် မြင်မိရာမှ ပေါ်ပေါလာခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ကတော့ မြန်မာပြည်ရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အကူးအပြောင်းကာတိုင်းမှာ ဒီလို ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းတွေ ဖြစ်နေကျမို့ အခုအဖြစ်အပျက်ဟာလဲ တမင်ချိန်ကိုက်လုပ်ဆောင်ခြင်းပဲလားလို့လဲ လေ့လာသူတချို့ကတော့ မေးခွန်းထုတ်နေကြပါတယ်။
March 31, 2012 at 7:31 am | Reply
U Aung Soe Lynn wrote wisely on my FB
သတင်းမီဒီယာတွေအဆင့်အတန်းတစ်ခုတော့ရှိသင့်ပါတယ်။ Sensitive issues တွေကိုလိမ္မာပါးနပ်စွာနဲ့ဦးတ​ည်ချက်ထားပြီးရေးလိုက်ရင်ပိုပြီးကောင်းလာမှာပါ။ပေးချင်​တဲ့ Message ကဘာလဲ………….restrict​ed area for other religious or highlight to violent action လား..minorities အပေါ်မှာအနိုင်ကျင့်တဲ့လုပ်ရ​ပ်တွေဟာတိုင်းပြည်ရဲ့ဂုဏ်သိ​က္ခာထိခိုက်စေတယ်။ဥပဒေဘောင်ထဲကကိုင်တွယ်ရင်ပိုမကောင်းဘူးလား။ယဉ်းကျေးတဲ့လူ့အဖွဲ့အစ​ည်းဖြစ်ဖို့တစ်ဦးချင်းတာဝန်​ပါ။အားကြီးတဲ့သူကအနိုင့်ကျင့်တဲ့ stone age ကအတိုင်းပဲဆိုရင်အတော်ရင်းေ​လးစရာကောင်းပါတယ်။ ကြားဖူးသလောက်ကျောက်ပန်းတော​င်းဟာဘာသားခြားတွေအတွက်အထူး​သတိပြု့ရမယ့်နေရပ်ပါ။နိုင်ငံတိုင်းမှာ အမျိုးသားရေးဝါဒီတွေရှိနေမှာပါ။မြန်မာတွေလဲအကြောင်းကြောင်းကြောင့်နိုင်ငံပေါင်းစုံကိုရောက်နေကြပါတယ်။ Discrimiantion, hostile action, marginalisationတွေကြုံကျရမှာပါ။ကိုင်ချင်းစာတရားများထားနိုင်ကျပါစေ။
March 31, 2012 at 1:28 pm | Reply
Extracts from: “Burma”, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor. International Religious Freedom Report 2010 Report November 17, 2010
In November 2008 the U.N. Committee on the Elimination of Discrimination against Women urged the government to review its citizenship law. In February 2010 the UN special rapporteur for human rights in the country visited and noted discrimination against Muslims.
The Ministry of Religious Affairs has stipulated in the past that permission to construct or repair religious buildings “depends upon the population of the location”; however, there appeared to be no correlation between the construction of pagodas and the demand for additional places of Buddhist worship.
Muslims residing in Rangoon could visit beach resort areas in Thandwe, Rakhine state, but could not return to Rangoon without the signature of the Regional Military Commander. Muslims residing outside Rakhine state often were barred from return travel to their homes if they visited parts of Rakhine state.
April 19, 2012 at 12:55 pm | Reply
Thant Sin Phyoe‎@ Aye Mon >> ကျောက်ပန်းတောင်းကိစ္စကို ပြန်လည်ပြောဆိုတာတွေ့ရလို့ တစ်ချက်လောက်ရှင်းပြပါရစေ..​. ကျနော်သိသလောက် ကျောက်ပန်းတောင်းကိစ္စက ဗလီဆောက်တာမဟုတ်ပါဘူး… အိမ်ကိုလည်း ဗလီအသွင်ပြောင်းတာမဟုတ်ပါဘူး… ကျောက်ပန်းတောင်းမှာ အလုပ်ကိစ္စနဲ့ရောက်နေတဲ့ မုစ်လင်မ်နည်းနည်းလေးက သူတို့နေတဲ့အိမ်မှာ ဝတ်ပြုချိန်မှာစုပေါင်းဝတ်ြ​ပုတာပါ… အစ္စလာမ်ဘာသာမှာ တစ်နေ့ကို ၅ကြိမ်ဝတ်ပြုရပါတယ်… အဲ့ဒီလိုဝတ်ပြုတဲ့အခါမှာလည်း အမျိုးသားများဆိုရင် တတ်နိုင်သလောက်စုပေါင်းဝတ်ြ​ပုရပါတယ်.. ဒါ့ကြောင့် သူတို့ငှါးနေတဲ့အိမ်ထဲမှာ စုပေါင်းဝတ်ပြုတာဖြစ်ပြီး ဗလီဆောက်ဖို့လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး… အဲ့ဒါကို ဘယ်သူက ဖွလိုက်တယ်မသိဘူး ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့ထဲမှာ​ မုစ်လင်မ်တွေရောက်ပြီး အဲ့ဒီအိမ်မှာစုပေါင်းဝတ်ပြု​တာကို ဗလီလုပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဆြို​ပီး အိမ်ကိုဝိုင်းဖြိုတယ်လို့ အသံထွက်တာပါ… ကျနော့အမြင်တော့ ကောလဟာလကြောင့် ဒီသတင်းထွက်လာတာပါ…
လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်ရှိ​တဲ့နိုင်ငံမှာ ကိုယ့်အိမ်ထဲမှာ စုပြီးဝတ်ပြုတာတော့ ခွင့်ပြုပါတယ်… နောက်ပြီး ဗလီဆောက်ဖို့လုပ်တယ် ဗလီအသွင်ပြောင်းတယ်ဆိုတာလဲမ​ဟုတ်ပါဘူး… မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဥပဒေအရ သာသနိကအဆောက်အဦးဆောက်ချင်ရ​င် သာသနာ့မြေအဖြစ်အရင်လျှောက်ြ​ပီးမှ ဆောက်ခွင့်ရှိပါတယ်… နောက်တစ်ချက်က အတည်တကျနေထိုင်ဖို့မဟုတ်ပဲ အလုပ်ကိစ္စကြောင့်ရောက်သူတွေ​အနေနဲ့ သူတို့ငှါးနေတဲ့အိမ်မှာ ဝတ်ပြုတာဟာ ခွင့်မပြုနိုင်လောက်တဲ့အနေအ​ထားမဟုတ်ပါဘူး… ဒီတော့ ဗလီဆောက်ဖို့လုပ်တာမဟုတ်တဲ့​ကိစ္စကို ဗလီဆောက်ဖို့လုပ်သယောင်ယောင် ဗားမားဗီဂျေက သတင်းကိုအပိုတွေထည့်ပြီးဖြန့်ခဲ့တာပါ… ဒီလောက်ဆိုရင် နားလည်လိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်​…
April 21, 2012 at 5:55 am | Reply
Source: FB of Tine Yin Thar Mu
ဥပဒေမဲ့အတင်းအဓမ္မမောင်းထုတ်ခြဲ့​ပီးဖြစ်ပါသည်။ထိုကဲ့သို့မင်းမဲ့​စရိုက်ဆန်စွာပြုမူခဲ့မှုကို အစိုးရမှလစ်လျှူရှုခဲ့သည်မှာလည်း​ထင်ရှားခဲ့ပါသည်။ထို့ကြောင့် မြန်မာပြည်ရှိ နိုင်ငံတော်
အသိအမှတ်ပြု အစ္စလာမ်ဘာသာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း အားလုံးမှလည်းကောင်း ၊ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များမှလည်းကောင်း​ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့တွင်အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် မရှိကြောင်းသိနေကြပါသည်။
၃၁-၃-၂၀၁၂ နံနက် ၆း၃၀ တွင် BBC သတင်းဌာနမှ ကျောက်ပန်းတောင်မြို့တွင်အစ္စလာမ်ဗလီ
ထုတ်လွှင့်ခဲ့သော သတင်းကိုမယုံနိုင်သဖြင့် ကိုယ်တိုင်စုံစမ်းကြည့်သောအခါတွ​င်
စွပ်စွဲပြောဆိုကာ နေအိမ်တစ်လုံးကိုNLD ပါတီဝင်များ ၊ မြို့သူမြို့သားများ ဘုန်းတော်ကြီးများ
ကိုယ်တိုင် ပါဝင်ဖျက်ဆီးပစ်ကြောင်း သိရပါသည်။အခြေခံဖြစ်စဉ်မှာ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့သူ
တစ်ဦးမှ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တစ်ဦးကိုအိမ်ထော​င်ပြုထားပြီး ၎င်း၏အိမ် ပြင်ဆင်တည်ဆောက်ရာတွင် ရေအုတ်ကန်တွင်ရေပိုက်ခေါင်းတပ်ဆ​င်သည်ကို
ဘူဒိုဇာကားနှင့်ပါ ၀င်ရောက်ဖျက်ပစ်ခဲ့ပါသည်။၎င်းဝန်ြး​ခံကို ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုသတင်းယူ မရနိုင်ရန်ဝန်းထရံအသစ်များခတ်ပစ်ပါသည်။
သတင်းဌာနအသီးသီး ၊ ဂျာနယ်အသီးသီးမှ သတင်းထောက်များ သတင်းယူစုံစမ်းမှုပြုလုပ်ရန်
ရောက်လာသောအခါ သတင်းထောက်များအားဆက်လက်စုံစမ်း​မှု ပြုလုပ်လျှင် အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်ဟုဆိုကာပိတ်ပ​င်မှုပြုလုပ်ပါသည်။ကြားဖြတ်ရွေးေ​ကာက်ပွဲ အတွက်ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့ပေါ်တွင်သတင်းယူရန်ရောက်နေသော သတင်းထောက်များထဲမှ တစ်ဦးသည် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံး တာဝန်ရှိသူများကို သတင်းမေးသောအခါ ဤကိစ္စကိုမမေးရန် ဖြေခဲ့ပါသည်။မြို့ခံအချို့နှင့်​ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၏ဥပဒေမဲ့လုပ်ရ​ပ်ကို လူသားချင်းစာနာမှုအနေဖြင့်မြို့ခံအချို့မှာ လက်ခံနိုင်ချေမရှိသဖြင့် ပြန်လည်ပြောပြသိရှိရပါသည်။
တိုင်းရင်းသား @ https://www.facebook.com/profile.php?id=100003756192699#!/profile.php?id=100003756192699&sk=wall